Madaxwaynaha DDSI Oo Xadhiga Kajaray Mashruuca Biyo Galinta Sanxaskule Iyo Mula Oo Laga Bilaabay Mashruuca Biyo Galinta. - Cakaara News
Madaxwaynaha DDSI Oo Xadhiga Kajaray Mashruuca Biyo Galinta Sanxaskule Iyo Mula Oo Laga Bilaabay Mashruuca Biyo Galinta.
Sanxaskule(CN) Axad.Feb.22.2015, sida aad wararayagii hore kala socoteen CakaaraNews maalintii shalay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo masuuliyiin kuwehelinaysay ayaa socdaal hawleed oo mashaariicana xadhiga lagaga jarayay kuwana lagu dhagax dhigay oogu anbabaxay deegaano katirsan degmada Qabribayax iyo degmada Goljano.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa socdaalkan kumaray wadada rafta ah ee u dhaxaysa qabribayax iyo Sanxaskule halkaas oo uu madaxwaynuhu kulamo badan oo wada tashi ah kulayeeshay bulshada kudhaqan deegaanada dhalaandhiga, Qoraan, Mula, Sanxaskule, iyo deegaano badan oo miyiga iyo tuulooyinka u dhaxeeya degmooyinkaasi.
Madaxwaynaha oo shirar iyo kulamo kulayeelanayay bulshadaasi tuulooyinka Qoraan iyo Mula islamarkaana xaalada nolsha dhabta ah ee baadiyaha kormeerayay ayaa gaadhay Centerka Sanxaskule ee degmada Goljano halkaas oo uu madaxwayne Cabdi Maxamuud xadhiga kaga jaray mashruuca ceel biyoodka riiga ah ee Sanxaskule kaasoo ay aad ugu diirsadeen bulshada xoolo-dhaqatada ah deegaanada Sanxaskule, Mula iyo qaybo kalaba.
Bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaanadaasi oo hada kahor ahaa dhulkii ay nabadiidku hagardaamiyeen ee oomanaha looga kala hayaamay ayaa aad ugu diirsaday ceelkan riiga ah oo isbadal nololeed u keensaday bulshada deegaanadaasi.
Kulan Balaadhan oo madaxwaynuhu layeeshay bulshada kudhaqan Senterka Sanxaskule ayuu kula dardaarmay in ay lahaansho dareemaan islamarkaana ay garab taagnaadaan dadaalka ay xukuumadu ugu jirto horumarka xawliga ah.
Shirkaas Sanxaskule ayay bulshadu aad uga mahad celiyeen sida ay xukuumadu uga jawaabayso baahida shacabkeeda iyagoo balan qaaday in ay sii xoojinayaan kaalintooda lahaansho ee ay ku garabtaaganyhiin horumarka iyo nabadgaliyada. Sidoo kale waxay shacabka ree Sanxaskule codsadeen in ay xukuumadu u dadajiso dhismaha ceelka ay xukuumadu kabilaabayso tuulada Mula oo ah deegaanka kudhaw oo ay hada siwada jira u isticmaalaan ceelka Sanxaskule kaasoo ay deegaano badan kudiirsadeen.
Kulankaas ayaa sidoo kale lagusoo bandhigay riwaayado xanbaarsan fariimo katurjumaya ahmiyada horumarka iyo nabadgaliyada taasoo ay reer Sanxaskule aad ula dhaceen.
Madaxwaynaha iyo waftigiisa ayaa galabnimadii shalay wakhti gaaban kasoo anbabaxay Sanxaskule iyagoo usoojihaystay tuulada Mula oo ay xalay u hoydeen islamarkaana sii marayay bulshada xoolo dhaqatada ah ee kudhaqan deegaankaasi.
Kala soco CakaaraNews warbixinta iyo shirarka kusaabsan Mula oo ay xalay u hoydeen madaxwaynaha iyo waftigiisa islamarkaana laga bilaabay mashaariico kala duwan oo dhanka biyaha iyo caafimaadka ah.